Ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebubata ihe ịsa ahụ nke China nwere nrụgide - Huanyu Sanitary Ware
Home > Ngwaahịa > Isi ịsa ahụ > Ịsa ahụ nwere nrụgide
Ịsa ahụ nwere nrụgide Ndị nrụpụta
Ningbo Huanyu Sanitary Ware Limited, a elu ọkachamara emeputa & Exporter na China na kemgbe na plastic ahịrị n'ihi na ihe karịrị 20 afọ na na sanitary ware ụlọ ọrụ ihe karịrị 10 afọ, Ọzọkwa. anyị ejirila usoro njikwa njikwa mma ISO 9002S na mbụ nke 1999. anyị na-arụpụta ngwaahịa ya niile na China. Ngwaahịa anyị bụ ahịrị ịdị ọcha nke ngwaahịa anyị gụnyere dị ka ndị a: Onye isi ịsa ahụ, isi ihe ịsa ahụ, ihe ndọtị ụgbọ okporo ígwè, ịsa ahụ na-agba agba, ịsa ahụ, ihe ịsa ahụ, braket mgbidi ịsa ahụ, ngwa ịsa ahụ, ịsa ahụ Bidet, ngwa ịsa ahụ & ngwa ịsa ahụ yana ịzụ ahịa na akụrụngwa ịdị ọcha ndị ọzọ. ngwaahịa na Mere in China Weebụsaịtị.
Nke a Pressurized Shower China factory soplaya, ezigbo mma 304 igwe anaghị agba nchara, enyemaka tinye mmiri mgbali, chekwaa mmiri, siri ike na inogide
Anyị nwere ike ike ịzụlite a dịgasị iche iche nke ọhụrụ ngwaahịa dị iche iche nha na nkọwa na okenye ahịa anyị nhọrọ dị iche iche na dị iche iche chọrọ. A na-ekwe nkwa ịdị elu nke isi ịsa ahụ site na teknụzụ dị elu, akụrụngwa ọgbara ọhụrụ, na njikwa mma na ọkwa mmepụta ọ bụla. Ọwụwa mmiri anyị nwere nrụgide na-ewu ewu nke ukwuu n'ihi ọrụ dị mma anyị.
Ogwe igwe anaghị agba nchara mmiri aka ịsa ahụ
Nke a igwe anaghị agba nchara mmiri na-azọpụta aka ịsa ahụ dị mma 304 igwe anaghị agba nchara, Na-abawanye nrụgide mmiri na-echekwa mmiri, China factory soplaya n'ogbe,
Ogwe igwe anaghị agba nchara na-agbanye mmiri ịsa ahụ na-echekwa mmiri
Igwe anaghị agba nchara a na-agbanye mmiri na-echekwa mmiri ịsa ahụ China factory supplier wholesale, ezigbo mma 304 igwe anaghị agba nchara, nyere aka tinye nrụgide mmiri, chekwaa mmiri, siri ike na inogide.
Ogwe igwe anaghị agba nchara chrome nwere nsogbu ịsa ahụ
Nke a Chrome igwe anaghị agba nchara panel pressurized ịsa ahụ kpochapụwo ịke, ewu ewu, 304 igwe anaghị agba nchara na-azọpụta mmiri, na-abawanye nrụgide mmiri, ahụmahụ spa dị mma.
Igwe igwe anaghị agba nchara na-arụ ọrụ atọ
Nke a atọ arụ ọrụ igwe anaghị agba nchara pressurized ịsa 304 elu-edu igwe anaghị agba nchara mmiri na-azọpụta panel, na-abawanye nrụgide mmiri, mma spa ahụmahụ, green na chromed dị.
Igwe ịsa ahụ na-echekwa mmiri nwere ụgbọ elu atọ
Nke a na-awụsa mmiri na-echekwa mmiri nke Jet atọ a na-eme ka ọ dị elu ABS dị elu, siri ike ma dịgidere, mmiri mmiri silicone, mmiri dị larịị, ịsa ahụ ọsọ atọ, s.s. panel na omenala mmiri mmiri na-emepụta mix, ihe okike, àgwà dị elu
Mfe Otu arụrụ arụ ịsa ahụ na-echekwa mmiri
Nke a dị mfe otu ọrụ ịsa ahụ na-echekwa mmiri dị mma 304 igwe anaghị agba nchara, nyere aka tinye nrụgide mmiri, chekwaa mmiri, siri ike ma dịgidere
Zụrụ ngwaahịa sitere na ụlọ ọrụ anyị a na-akpọ Huanyu Sanitary Ware bụ otu n'ime ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebuga Ịsa ahụ nwere nrụgide na china. Ogo anyị dị elu Ịsa ahụ nwere nrụgide na-ewu ewu na ndị chọrọ inweta ngwa ahịa dị ọnụ ala. Anyị nwere ọtụtụ ngwaahịa iji nye ọrụ n'ogbe. Ị nwere ike ijide n'aka ịzụta ọnụ ala dị ala site na ụlọ ọrụ anyị.